Kitapo misy mololo, Kitapo fitaovana avy amin'ny bosoa, Kitapo taratasy - Changlin
Landihazo azo averina
Trondro lamina trondro RPET 100% Recycled Chest ...
Camouflage RPET Kitapo 100% Recycled Pock ...
Waffle modely RPET Bag Mavesatra Makeup Bag Natu ...
Fotoana iainana matanjaka Eco Custom Durable Washable Z ...
Tyvek taratasy harona mateza azo nosasana Zipper ...
Taratasy kraft azo kosasana maharitra Zipper Closure Mak ...
Kitapo lamba vita amin'ny lamba mananasy maimaim-poana Cos ...
Cosmetic TPU manala baraka ny tontolo iainana ...
Kitapo vita amin'ny ravina voajanahary Eco-friendly Cosmetic O ...
Kitapo kosmetika mpiorina tontolo iainana Zipper Pouc ...
Kitapo vita amin'ny ravina taratasy Eco-friendly Natural Colour Ma ...
Kitapo voajanahary mamirapiratra vita amin'ny lamba kosmetika mpikarakara Mak ...
Kitapo landihazo voajanahary Tontolon'ny kitapo maharitra maharitra ...
Manana fitaovana teknika mandroso maro
Ekipa mpamorona efa za-draharaha sy mpiasa mahay mihoatra ny 150
Andalana famokarana roa lehibe izay mahazaka kitapo 1 tapitrisa isam-bolana
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) dia fantatra amin'ny anarana hoe lamba maitso tavoahangy coke. Izy io dia karazana lamba maitso maitso vaovao novolavolain'ny kofehy PET sarobidy. Ny fiandohan'ny karbaona ambany dia namorona hevitra vaovao eo amin'ny sehatry ny famerenana indray.Raha ny fanamarinana fanandramana, afaka mamonjy efa ho 80 ...
Nanambara 'ady' amin'ny fandotoana plastika i Shina
Miezaka ny hampihena ny fampiasana ireo vokatra plastika tsy vita amin'ny laoniny i Shina amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny indostria plastika, 12 taona taorian'ny fameperana voalohany natao tamin'ny harona plastika. Ny fahatsiarovan-tena momba ny fahalotoan'ny plastika dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary Chi ...
Orinasa Jiafeng: ny vokatra RPET dia ho fironana amin'ny fampandrosoana maharitra ny fitaovana amin'ny ho avy.
Amin'izao fotoana izao dia maika ny hiarovana ny tontolo iainana. Indostria maro kokoa no mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fivezivezena amin'ny tontolo iainana ary miditra amin'ny RPET ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto an-tany. ..
Izany no tavoahangy fiainana vaovao, elo Coca-Cola RPET "nipetraka" Qingdao North Railway Station
Tamin'ny Aogositra, 2020, teo amin'ny fiampitana mpandeha an-tongotra ny Qingdao North Railway Station, elo manokana maromaro no natsangana, izay nanaovana pirinty ireo singa manana ny toetra Qingdao toy ny spray, seagull ary ny maritrano. Ny tena nahavariana dia ny teny hoe: «tavoahangy plastika aho taloha ...
Changlin Industrials Co., Ltd. naorina tamin'ny 2017, dia miasa amin'ny famokarana kitapo kosmetika, kitapo fanasana, kitapo fidiovana, kitapo fanomezana, kitapo fonosana, kitapo fampiroboroboana, kitapo fiantsenana, kitapo amoron-dranomasina sns Changlin dia zavamaniry sampan'ny Jiafeng Plastic Products CO., LTD raha i Jiafeng kosa manana bebe kokoa 20 taona niainany tamin'ny fanaovana kitapo kosmetika.
Fitaovana teknika avo lenta
Fiarovana ny tontolo iainana matanjaka
Mahatratra ny fampandrosoana maharitra
Omeo ny vokatra sy serivisy tsara indrindra